सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई गोकुल बास्कोटाको चुनौती - Nepal Post Daily
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई गोकुल बास्कोटाको चुनौती
काठमाडौँ,२३ चैत । पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बास्कोटाले माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन नसक्ने, अनि काम चलाउन भो रे। समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, नयाँ ढंगले अघि बढ्छ। आफैँ अड्काउने आफैँ पड्काउने? विचार लिएर जान सबै स्वतन्त्र हुन्छ। चुनावमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने शाही जनवाद ल्याउन गरिएको प्रयास चाहिँ अग्रगमन हुने हो र?’
चुनावदेखि डराउनेहरुले संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ताजा जनादेशको विकल्प छैन। संसद विघटन बेठिक थिएन। बेलायत, भारतमा पनि चुनावमा हुने गरेको छ। त्यो प्रतिगमन हुन्छ? चुनाव सुन्दै डराउने?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको पक्षमा काम गरेको देखेर केही व्यक्तिहरुको प्रेसर बढेको उनले बताए। ओली नेतृत्वको सरकार देशलाई समृद्ध बनाउन लागेको उनको दावी थियो।
Previous articleमनकामना केबुलकार ६ दिन बन्द हुने
Next articleकांग्रेसले सरकार बनाउने विषयमा एकलौटी निर्णय गर्‍योः राजेन्द्र महतो